Login ပြန်ဝင်လို့ရပါပြီ — MYSTERY ZILLION
မူလ › About Forum › Project
January 2008 edited November 2008 in Project
အခုတော့ mmglite ကို US ကို UK ပြောင်းစရာမလိုပဲ ပြန်သုံးလို့ရပါပြီဗျာ..
ကျွန်တော်လည်း mmglite ကိုလှည့်မကြည့်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်..
ဖြေရှင်းတဲ့ soultion တွေက ထွက်ပြီးသားမို့...
ဒါပေမယ့် ခေါင်းတော့ မူးသွားတာ အမှန်ပဲ...
ကိုယ့် browser မှ cache တို့ cookies တို့ကို ဖျက်ပြီး ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ...
ကျွန်တော် update လုပ်ပြီး... ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီးပါပြီ...
Update လုပ်တာ နောက်ကျသွားတဲ့ အတွက် အနူးအညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်....
January 2008 edited January 2008 Administrators
ကောင်လိုက်တာ တစ်ကယ်သုံးလို့ရသွားပြီ ကိုး ဒါကြောင့် ပြောပါတယ် စည်သူ နဲ့ စေတန် တွေ့ လို့ မဖြစ်ဘူးလို့ တွေ့ မိရင် တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်သွွားတာကြီးပဲ။ ကောင်းတာ မဟုတ်ရင် တော့ ဆိုးတာပေါ့။
January 2008 edited January 2008 Registered Users
အဲ့ဒါလေး ဘယ်လို ဖြေရှင်းလိုက်သလဲဆိုတာ :d:d
ကိုစေတန်.. ပြောပြနိုင်မလား ????
khunmk wrote: »
လွယ်ပါ့... နောက်ဆုံး libgmailer ကိုသွင်းရတာပေါ့..
ဒါပေမယ့် public release မလုပ်ဘူးနော်...
သူတို့က 0.9 အဓိကပဲ release လုပ်ထားတယ်..
အဲမှာ သွားပြီး ဆွဲလိုက်ကွာ..
ရှဲ ရှဲ (ရှုးပေါက်သံမဟုတ်)
ကိုစေတန် ရေ့ :5:
အရှေ့မှာ ဒါလေးတွေ ပြနေတယ် ကိုစေတန် :5:
u0026raquo; တွေ ပြနေတယ်....
ဘယ်လို fixed ရမှာလဲဟင်... :106:
ဒီမှာ screen shoot....
မရရင် ဒါကို သုံး စိတ်ချမ်းသာမယ် တသက်လုံး
ကျေးကျူးကမ္ဘာကြိုင်ရော... အက်မင်ကြီး... :d:d :5::5::5:
April 2008 edited April 2008 Registered Users
အစ်ကိုတို့ရေကျွန်တော့ glite မှာ Signin failed. Gmail connection error. Try again afterafew minutes. ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်..ကိုစေတန်ပြောသလိုနောက်ဆုံး libgmailer လဲ change ပြီးပြီ..မရဘူးဖြစ်နေတယ်. ..နည်းလမ်းလေးပြောပြကြပါဦး...:18::42:
ကျွန်တော်က cyber cafe တခုမှာ administrator လုပ်ပါတယ်။
customer တွေအတွက် glite လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။
လုပ်လဲမလုပ်တတ်ဘူး။ guide line လေးပေးပါနော်။
October 2008 edited October 2008 Registered Users
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လေ့လာနေသူပါ။ အဲဒါကိုဘာလဲလို့သိချင်ပါတယ်။ admin တွေက စာပြန်ထားတာမတွေ့ပါဘူး။ အကျုံးမ၀င်လို့လား ။ တခြားနည်းနဲ့များ အကြောင်းပြန်ထားတာလား သိချင်ပါတယ်။
clear wrote: »
ဒီအောက်မှာ ရှာ ကြည့်ပါလား
mystery zillion forum > server side > php
mmgliteကို၀င်လိုက်ရင် အဲ့လိုပဲပေါ်တယ် ..
Please try the following: If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
ကျွန်တော် mm glite ကို internet ဆိုင်တဆိုင်မှာ စတွေ့ဖူးတာဗျ ။ အဲတုန်းက သုံးတာတော်တော် အဆင်ပြေတယ် ။
နောက်တော့ ဖွင့်လိုက်မရတော့ဘူးဗျ ။ အခုလည်း MZ ကို သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီက ရတာဗျ ။
ကျွန်တော်ကို mmglite ရဲ့ address အတိအကျလေးပြောပြပေးနိုင်မလားဗျ ။
ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ့ error တက်နေလို့့ပါ
တင်ထားတဲ့ web hosting က http://www.000webhost.com မှာပါ
Test3(curl http):
Warning: curl_setopt() URL="http://h4ckerzero.net46.net/gmail/function.curl-setopt"]function.curl-setopt[/URL: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/a5532904/public_html/gmail/diagnose.php on line 62
Test4(SSL via curl): FAILED. CURL error: Protocol https not supported or disabled in libcurl. Please check your curl-ssl settings.